ब्ल्याकआउट सुनेटेक्स निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन ब्ल्याकआउट सुनेटेक्स कारखाना
उच्च-गुणवत्ता ब्लैकआउट रोलर ब्लाइन्ड्स कपडाहरू
Sunetex ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा शीर्ष गुण र राम्रो वर्णहरूको साथ १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। हामी तपाईंको विन्डोको लागि २००/२30०/२50०/3०० सेमी विभिन्न चौडाइहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं, र मानक लम्बाई 40० मिटर प्रति रोल हो। उच्च शक्ति पोलिस्टर फेब्रिकले हाम्रो कपडाको शक्ति नायलॉन भन्दा times गुणा बढी र भिस्कोस भन्दा २० गुणा बढी बनाउँछ; राम्रो लोच हाम्रो उत्पादहरु लाई दृढ, टिकाऊ, शिकन प्रतिरोधी बनाउँदछ। यसको अलावा, हाम्रो पॉलिएस्टर कपडा एक उच्च गर्मी प्रतिरोध र थर्मल इन्सुलेशन छ। तिनीहरू कुनै ढाँचा, कुनै कीट, कुनै विरूपण, लामो समय उपयोग पछि कुनै क्र्याक छैनन्।
एक डबल अनुहार र color्ग गोंद कोटिंग विधिको साथ, यसले प्रकाश बाहिर राख्नमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। हाम्रो कपडा आगो निवारण र जलरोधक हो, यो NFPA701 पास गर्न सक्दछ(संयुक्त राज्य अमेरिका)प्रमाणीकरण, र रंग स्थिरता यदि ग्रेड 4.5.।। उच्च-गुणवत्ताको कच्चा पॉलिएस्टर मटेरीअल हाम्रो कपडा हाम्रो ग्राहकहरु बीच लोकप्रिय हुन्छ। यो विद्यालय, कार्यालय र घरको लागि उपयुक्त छ। हामी तपाईंको लागि नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं!
उच्च-गुणवत्ता रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा पॉलिएस्टर ब्ल्याकआउट
Sunetex ब्लैकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा हाम्रो ग्राहकहरु को बीच एक सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादन हो। यो १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ। हामी तपाईं लाई छनौट गर्नका लागि २००/२30०/3०० बिभिन्न चौड़ाई प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो कपडाको वजन प्रति मीटर gs 360०gsm छ। र color्ग गोंद र फोम सेतो कोटिंग विधिको साथ, हाम्रो ब्ल्याकआउट कपडाको उच्च गुणवत्ता छ। हामीसँग तपाईंको लागि १० भन्दा बढी फेशन रंगहरू छन्। र हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि बिभिन्न प्रकारहरू छन्, तपाईं कसैलाई पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो कपडा आगो निवारण र जलरोधक हो, यो NFPA701 पास गर्न सक्दछ(संयुक्त राज्य अमेरिका)प्रमाणीकरण, र रंग स्थिरता यदि ग्रेड 4.5.। छ, जसले यसले हाम्रो ग्राहकहरूको बीचमा उच्च प्रतिष्ठाको आनन्द लिन्छ। यो'स्कूल, घर, र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ। केअधिक, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
कार्यालयका लागि ईन्डोर विन्डो ब्लाइन्ड्स ब्ल्याकआउट कपडा
Sunetex इनडोर विन्डो ब्लाइन्ड्स ब्ल्याकआउट कपडा अफिसका लागि राम्रो गुणमा पॉलिएस्टरले बनेको छ। यो टिकाऊ हो, कुनै मोल्ड र कुनै कीट छैन। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि अनेक प्रकारका शास्त्रीय र colorsहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ। हाम्रो कपडा वाटरप्रूफ र आगो निवारण हो। वातावरणीय मैत्री कपडाहरू, गैर विषैले र स्वादहीनको साथ अपनाइएको जुन तपाईंलाई आरामदायक वातावरण बनाउँदछ। हाम्रा उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा हाम्रा ग्राहकहरूलाई मानसिक शान्तिको बनाउनुहोस्।
Jacquard रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा ब्ल्याकआउट
Sunetex Jacquard रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा ब्ल्याकआउट श्रृंखला उत्पादनहरू उच्च गुणवत्ताको साथ १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। हामी विभिन्न कोटिंग विधिका साथ जैकवर्ड कपडाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। डबल अनुहार डिप-कोटिंग विधिले सेमी ब्ल्याकआउट कपडाहरू, फोम सेतो कोटिंग विधिले ब्ल्याकआउट कपडाहरू बनाउन सक्दछ। हाम्रो उत्पादनहरू स्कूल, कार्यालय र घरको लागि उपयुक्त छन्। तपाईका सन्देशहरुलाई स्वागत छ!
Sunetex Jacquard रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा हाम्रो ग्राहकहरु बीच एक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि धेरै प्रकारका कपडाहरू छन्, प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ। र हामीसँग एउटा राम्रो टोली तपाईंसँग राम्रो सेवा प्रस्ताव गर्न सक्दछ, हामी प्रत्येक ग्राहकको राम्रो सेवा अनुभवमा केन्द्रित छौं र न्यानो वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छौं। हाम्रो पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई गुणवत्ता र रंग जाँच गर्न निःशुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
आधुनिक सजावट रोलर ब्लाइंड कपड़ा ब्ल्याकआउट
Sunetex आधुनिक सजावट रोलर ब्लाइंड कपड़ा ब्ल्याकआउट पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। फोम कलर कोटिंगले केवल ब्ल्याकआउट मात्र गर्दैन, तर फेसन पनि बनाउँछ। हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। मानक चौडाई २०० सेमी र २0० सेमी हो। मानक वजन 330gsm प्रति वर्ग मीटर है। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न रंगहरू छन्।
Sunetex आधुनिक सजावट रोलर ब्लाइंड कपड़ा ब्ल्याकआउट हाम्रो ग्राहकहरु मा एक उच्च पुन: खरीद दर को मजा लिन्छ। उच्च गुणस्तरको कपडाको साथ, यो टिकाऊ हो र जीवनकाल १० बर्ष हुन सक्छ। हामी निर्माताहरू हौं, हामी हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सिधै सामानहरू बेच्दछौं, यसले तपाईंलाई मध्यवर्ती खर्चहरू छोडिदिन मद्दत गर्दछ। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
नयाँ डिजाइन रोलर ब्लाइंड कपड़ा ब्ल्याकआउट
Sunetex ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा शीर्ष गुण र राम्रो वर्णहरूको साथ १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। डबल अनुहार र color्ग गोंद कोटिंग विधिको साथ, यसले प्रकाश र व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षा राख्नमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। राम्रो गुणस्तरको पॉलिएस्टर सामग्रीले यसलाई टिकाऊ बनाउन सक्दछ, कुनै मोल्ड, कुनै पतंग, कुनै विरूपण, लामो समय उपयोग पछि कुनै ट्र्याक।
हामी १ professional बर्ष भन्दा बढीको लागि ब्लाइन्डमा एक पेशेवर निर्माता हो। हाम्रो लक्ष्य हाम्रो ग्राहकहरु को लागी एक सुविधाजनक एक स्टप खरीद हो। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई सही कपडा आपूर्ति गर्न को लागी लक्ष्य राख्छौं। हामी तपाईंलाई पहिलो सहयोगका लागि नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
राम्रो गुणवत्ता रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा ब्ल्याकआउट
SuneTex रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा हाम्रो तातो बेच्ने उत्पादनहरु मध्ये एक हो। यो उत्तम गुण र उचित मूल्य संग पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। तिनीहरू धेरै टिकाउ हुन्, तिनीहरूको जीवनकाल १० बर्ष हुन सक्छ। राम्रो गुण र सबै भन्दा राम्रो सेवा संग, हामी हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई तपाईलाई समर्थन गर्न २h घण्टा सेवा प्रदान गर्दछौं।
डुब्ने कोटिंग विधिसँग, जसले यो भाँडाइलेशन र प्रकाशमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। यसले तपाईंलाई शक्ति बचत गर्न सक्दछ। यो स्कूल, घर र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ। हामी मूल कारखाना आपूर्ति छौं, यदि तपाईं हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं अधिक मार्जिन सक्नुहुनेछ। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
रोलर ब्लाइन्ड ब्ल्याकआउट पर्दा फैब्रिक १g० ग्राम
Sunetex रोलर ब्लाइंड ब्ल्याकआउट पर्दा कपड़ा राम्रो गुणमा १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। उच्च गुणवत्ताको कच्चा माल अपनाएको साथ, यसले हाम्रो कपडा उच्च शक्तिसँग बनाउँछ। हामी विभिन्न कोटिंग विधिका साथ जैकवर्ड कपडाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीसँग, जसले हाम्रो कपडा सफासँग काटिएको छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि धेरै प्रकारका कपडाहरू छन्, प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ।
हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरूको लागि कडाई गुणवत्ता नियन्त्रण छ। हाम्रो सबै उत्पादनहरू राम्रो गुणवत्ता र उचित मूल्यमा छन्। हाम्रो टोलीले तपाईंलाई २ hours घण्टा उत्तम सेवा प्रस्ताव गर्दछ। हामी प्रत्येक ग्राहकको राम्रो सेवा अनुभवमा केन्द्रित छौं र न्यानो वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छौं। हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
रोलर ब्लाइन्ड ब्ल्याकआउट फैब्रिक १००% पॉलिएस्टर
Sunetex रोलर ब्लाइन्ड कपडा उच्च गुणको साथ 100% पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। मानक वजन १ square० ग्राम प्रति वर्ग मिटर हो। डबल फेस डिप कोटिंगको साथ, हाम्रो कपडा ब्ल्याकआउट छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति छ, तिनीहरू सुन्दर, उदार र विलासी छन्। वातावरणीय मैत्री कपडाहरू, गैर-विषाक्त र स्वादहीनको साथ अपनाइएको जुन तपाईंलाई आरामदायक वातावरण बनाउँदछ।
हाम्रो उत्पादनहरु हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। र यसले तपाईंलाई एक नियन्त्रण योग्य प्रकाश, इनडोर, छायांकन र तापक्रम नियन्त्रण, र पराबैगनी संरक्षणको लागि सामंजस्यपूर्ण प्रकाश प्रभावलाई मद्दत गर्दछ। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, र यदि तपाईंको अर्डर सानो छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने सामानहरूको लागि सामान्य स्टक छ। हामी तपाईंलाई गुणवत्ता र रंग जाँच गर्न नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
रोलर ब्लाइन्ड्स ब्ल्याकआउट कपडा पॉलिएस्टर
Sunetex ब्लैकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा शीर्ष गुणवत्ता र राम्रो वर्णहरूको साथ पॉलिएस्टरको बनेको छ। हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो गुणमा छन्, यो टिकाऊ हो, कुनै मोल्ड र कुनै पतंग छैन। हामीसँग तपाइँको छनौटको लागि शास्त्रीय सेतो र खरानी रंगहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ।
डबल फेस डिप कोटिंग विधिसँग जुन यसलाई बनाउँछ, Sunetex स्लबी यार्न कपडा हाम्रो उच्च पुन: खरीद दर उत्पादनहरू मध्ये एक हो। यसले तपाईंलाई इनडोर प्रकाश समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंको लागि अधिक सहज वातावरण प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो कपडाहरूमा १० बर्षे वारंटी प्रदान गर्दछौं। राम्रो गुण र सबै भन्दा राम्रो सेवा संग, हामी हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छौं। पहिलो पटक सहयोग को रूप मा, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूने प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
स्लबी यार्न ब्लाइन्ड कपडा फोम व्हाइट कोटिंग
Sunetex स्लबी यार्न ब्लाइन्ड कपडा उच्च गुणवत्ताको साथ पॉलिएस्टर ब्ल्याकआउट कपडाहरूबाट बनेको छ। फोम सेतो कोटिंगको साथ, कपडालाई कालोआउट गर्दछ। उन्नत मेशिन र टेक्नोलोजीले यसलाई राम्ररी काट्छ। हामीसँग बिभिन्न रंगीन र colors्गहरू छन्, तपाई जस्तो मन पराउनु भएको र match मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईको सन्झ्यालको २००/२30०/२50०/3०० सेन्टीमि फरक चौडाइहरू प्रदान गर्न सक्छौं, र मानक लम्बाई meters० मिटर प्रति रोल छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्, तपाईं कुनै पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
वातावरणीय मैत्री कपडाहरू, गैर-विषाक्त र स्वादहीनको साथ अपनाइएको जुन तपाईंलाई आरामदायक वातावरण बनाउँदछ। हाम्रा उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा हाम्रा ग्राहकहरूलाई मानसिक शान्तिको बनाउनुहोस्। हाम्रो उद्देश्य भनेको ग्राहकहरूको विन्डो साइजको आवश्यकता अनुसार हाम्रा ग्राहकहरूलाई सबैभन्दा उचित पर्दा समाधान प्रस्ताव गर्नु हो। हामी तपाईंलाई उत्तम फेसन समाधान प्रदान गर्न सक्छौं। हामी विश्व भर मा ग्राहकहरु को लागी स्थापना निर्देशन निर्देशन प्रदान गर्न सक्दछौं।
सुपीरियर प्लेन ब्लाइन्ड कपडा ब्ल्याकआउट
Sunetex सुपीरियर सादा ब्लाइन्ड कपडा उच्च शक्ति संग 100% पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। यो सेडि in मा राम्रो क्षमता छ। यसले अल्ट्राभायोलेट किरणहरू फिल्टर गर्न सक्छ, तपाईंको कार्यालयलाई काम गर्न सजिलो बनाउँदछ। यसले राम्रो वेंटिलेसन प्रभाव पनि गर्छ। चाँदी कोटिंग विधिको साथ, यो उत्तम र माथिल्लो छ। र हाम्रा उत्पादनहरू धेरै कडा र टिकाऊ छन्। हामी तपाईंको विन्डोको लागि २००/२30०/२50०/3०० सेमी विभिन्न चौडाइहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं, र मानक लम्बाई 40० मिटर प्रति रोल हो। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न रंगहरू छन्।
हामी १ professional बर्ष भन्दा बढीको लागि ब्लाइन्डमा एक पेशेवर निर्माता हो। हामी नेत्रहीन कपडा र सामान बेच्दछौं। हाम्रो लक्ष्य हाम्रो ग्राहकहरु को लागी एक सुविधाजनक एक स्टप खरीद हो। तपाईंको जीवन अझ राम्रो बनाउनको लागि, हामी तपाईंलाई उत्तम ब्लाइन्ड कपडाहरू प्रस्ताव गर्न सक्दो कोसिस गर्दछौं। हामी तपाईंलाई पहिलो सहयोगका लागि नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।